Website Design Services in Mandalay | Page3of4| Myanmar Web Store
LMS (Learning Management System) ဆိုတာဘာလဲ? L = Learning -> ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ Training (သို့မဟုတ်) Courses များကို online ကနေတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။...
Knowledge, Uncategorized, Web Design, Web Development, Website
မိမိ Website ကနေ Android Application ပြောင်းနည်း
Click to learn Most Popular language to android development -> Kotlin Related Articles- e-commerce လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်များ...
Image to GIF ပြောင်းနည်း
၁. မိမိ gif လုပ်လိုတဲ့ image များကို ရွေးပါ။ ၂. Image to GIF ပြောင်း Image အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုပါ။...
SEO – Search Engine Optimization ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website ကို Browser ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရောက်အောင်လုပ်တဲ့ နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့က...
e-commerce လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်များ ************************************************************** e-commerce website တွင် မိတ်ဆွေတို့၏ business လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ရန် 👉 မိတ်ဆွေတို့ online shop တွင် ဘယ်လောက်ထိ ရောင်းနိုင်ရမည်ဆိုသော...
Do not let customers go away by not havingawebsite! —————————————————— It’s an internet world...
Marketing နှင့် Branding လုပ်ခြင်းရဲ့ ကွဲပြားချက်က ဘာလဲ?****************************************************** #Marketing လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ,ဝန်ဆောင်မှုများကို တွန်းအားပေး၍ ဝယ်ယူချင်လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ– ကျွန်တော်တို့ Product ကို...
Do you know about facebook?? ******************************** Facebook ( social networking website ) ကို Thefacebook အမည်ဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ...
Website နှင့် Web Application ဘာကွာခြားလဲ? ****************************************** Website ကို ပြုလုပ်ထားသော Admin က မိမိ၏ Website Information အချက်အလက်များကို ပြုပြင်...
e-commerce ဆိုတာဘာလဲ? *************************** ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook ၌ မိမိတို့ products များအား postတင်၍ selling လုပ်ခြင်းသည် e-commerce မဟုတ်သေးချေ။ E-commerce...
June 5, 2020	1 Comments
January 30, 2020	1 Comments
Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this blog post. It was helpful. Keep on posting!| Darsey Timotheus...
I used to be able to find good information from your articles. Elli Doy Elle...
Wow, great blog article. Really thank you! Really Great. Calli Vince Ryon...
Highly energetic article, I enjoyed thatalot. Will there beapart 2? Isis Hall Ivory...